Compost Turner Fekitori | China Compost Turner Vagadziri, Vatengesi
Forklift mhando composting michina chishandiso chitsva-chekuchengetedza magetsi uye chakakosha michina yekugadzirwa kwe organic & komputa fetiraiza. Iine zvakanakira kukwirira kwekupwanya kushanda, kunyangwe kusanganisa, kunyatso kuisira uye kureba kufamba,
Hydraulic Kusimudza Composting Turner
Iyo Hydraulic Organic Waste Komposting Turner Muchina inoshandiswa pakuvirisa yemarara manyowa senge zvipfuyo uye manyowa ehuku, sludge marara, shuga chirimwa firita madhaka, madhiri ekeke furawa nehuswa huchi. Midziyo iyi inotora yakakurumbira groove mhando inoenderera aerobic yekumesa tekinoroji, yakaita kuti organic marara ikurumidze kushaya mvura, sterilized, deodorized, uzive chinangwa chekukuvadza, marara marara uye kudzikisira kwekugadzirisa, yakaderera simba kushandiswa uye yakatsiga chigadzirwa mhando.
Wheel Type Composting Turner Muchina otomatiki composting uye yekuvirisa michina ine hurefu hwakareba uye nekudzika kwezvipfuyo mupfudze, sludge nemarara, filtration matope, yakaderera slag keke nehuswa huchi muhuga zvigayo, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa uye kupera mvura mu organic fetiraiza zvirimwa, remubatanidzwa fetiraiza zvirimwa , mafekitori emarara uye emarara, mapurazi egadheni uye zvinomera zvebismuth.
Iyo Double Screw Komposting Turner inoshandiswa pakuvirisa mupfudze wemhuka, sludge marara, firita madhaka, madhiri, mushonga wemarara, mashanga, sawdust uye mamwe marara ehupenyu, uye unoshandiswa zvakanyanya kune aerobic Fermentation.
Iyo Vertical composting Kuvira Tangi yainyanyo shandiswa kutendeuka nekusanganisa marara ehupenyu semanyowa emhuka, sludge marara, shuga chigayo firita matope, kudya kwakashata uye mashanga akasara ehuswa uye imwe tsvina yemafuta yeanaerobic Fermentation Muchina unoshandiswa zvakanyanya mu organic fetiraiza chirimwa, sludge dump chirimwa, horticulture kudyara, kuvirisa kwekaviri spore kuora uye kubviswa kwemvura kushanda.
Muchina unogona kuviriswa kwemaawa makumi maviri nemana, uchivhara nzvimbo ye10-30m2. Iko hakuna kusvibiswa nekutora yakavharwa kuvirisa. Inogona kugadziridzwa kusvika 80-100 temperature yakanyanya tembiricha yekubvisa tupukanana nemazai ayo zvachose. Tinogona kuburitsa iyo reactor 5-50m3 akasiyana chinzvimbo, akasiyana mafom (yakatwasuka kana yakamira) yekuvirisa tangi.
Dhizaini nyowani Tsvina & Mufudze Kuvira Tangi inoshandiswa pakushambidzika kwakanyanya kweaerobic Fermentation nekushandisa hutachiona hwehutachiona tekinoroji, ine yakaderera simba rekushandisa uye yakaderera mashini ekushandisa.
Groove Rudzi Composting Turner
Groove Rudzi Composting Turner Muchina inoshandiswa mukuvirisa yemarara manyowa senge zvipfuyo uye manyowa ehuku, sludge marara, shuga chirimwa firita matope, marara uye huswa husavi. Inoshandiswa zvakanyanya mu organic fetiraiza zvirimwa uye mukomboni fotereza michero yeaerobic yekumisa
Crawler Type Organic Waste Composting Turner Muchidimbu
Crawler Inotyairwa Organic Waste Kompost Turner ndiwo muchina wehunyanzvi wemanyowa uye zvimwe zvekugadzirwa kwezvinhu. Inotora advanced hydraulic operating system, kudhonza tsvimbo simba rekufambisa mashandiro uye crawler-mhando inomhanya mashandiro.
Iyo Chain Plate Composting Turner Muchina ine zvakanakira kugona kwakanyanya, kusanganisa yunifomu, kutendeuka kwakazara uye kureba kufamba chinhambwe, nezvimwewo. Inogona kufananidzwa neyakagadzirwa-yekuchinja dhizaini kuti uone yakawanda-slot kutendeuka.
Kuzvifambisa wega Groove Composting Turner Muchina inowanzodaidzwa kunzi njanji mhando manyowa anotendeuka, track track komposita Turner, kutendeuka muchina etc.Iyo inogona kushandiswa pakuvira kwekupfuya mupfudze, sludge uye marara, kusefa matope kubva kune shuga chigayo, bio-gasi masara uye mashanga husavi uye imwe organic organic.